Cimilada: 10 Qodobbada Qosolka leh ee FMiner, Qalabka Kaydka Shabakada Weyn
FMiner waa qalab awood leh oo wax ku ool ah oo loogu talagalay shabakadaha internetka, soo saaridda macluumaadka,
shabakada websaydhka ama muujinta, shaashadda iyo taageerada macro ee Mac OS X iyo isticmaalayaasha Windows. Barnaamijkan fudud ee loo isticmaalo wuxuu isku daraa sifooyinka heer caalami ah iyo naqshad muuqaal ah.
Haddii aad tahay inaad ku soo bandhigto bogag badan oo shabakado ah ama inaad samayso mashruuc ka fiirso xogta soo saarta oo u baahan liisaska serverka iyo adeegga Ajax, FMiner waa xulasho sax ah! Barnaamijkan, si fudud ayaad u baran kartaa xogta macquulka ah ee sahlan iyo macquulka ah ee macdanta iyo farsamooyinka shabakadda, iyo xogta ka soo gala goobo kala duwan, sida goobaha hantida maguurtada ah, makiinadaha raadinta, bogagga hurdiga ah, buugta internetka, iyo boggaga internetka - autoteenindus 24h com.
Haddii aad fulinayso mashruuc u baahan cusbooneysi joogta ah oo degdeg ah, modulka jadwalka isdhexgalka FMiner wuxuu kuu oggolaan doonaa inaad qeexdo jadwalka marxaladaha. Qaar ka mid ah sifooyinka ugu caansan ayaa lagu sharxay hoos.
1. Doorashada Muuqaal Sawireed
Waxaad naqshadeyn kartaa mashaariicda soo saarida macluumaadka iyada oo la adeegsanayo tifaftiraha muuqaalka muuqaalka iyo helitaanka xogta la rabo in ka yar 10 daqiiqo.
2. No Codaynta Loo Baahan
Interface fudud, adeegsashada iyo isdhexgalka interactive ayaa kuu fududeynaya inaad diiwaangeliso mashaariicda la xoqdo iyada oo aan loo baahnayn xayiraado.
3. Heerarka sare
4. Doorasho Gaar ah ee Wadada Guusha:
FMiner wuxuu kaa caawinayaa inaad ku marsiiso boggaga internetka oo isku daraya qaababka isku xirka weyn, xulashada hoosta, qaabka URL iyo foomka gelitaanka foomka.
5. Liis-warbixineedka Lahaanshaha:
Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee FMiner waa inaad si sahlan u gudbin karto qiimaha waxaad rabtaa in aad isticmaasho foomka shabakada internetka ee bartilmaameedka.waxaad sidoo kale diyaarin kartaa liisyada ereyada muhiimka ah oo aad u soo gudbiso foomamka loogu talagalay ereyada kala duwan ee kelmadaha ah
6. Calaamadaha Xogta Dhabta:
FMiner waa loo yaqaan waxay u sahlanaataa in ay guryo isku xirnaadaan oo ay soo saaraan nuqulada alaabta la isku qurxiyo.Intaa waxa dheer, waxay hagaajineysaa natiijooyinka raadinta raadinta ee boggaaga oo aad u gudbiso xogtaada si aad u hesho fariimo waaweyn
7. Multi -Kulalka aadka u kordhay:
Meelaha aad ka heli karto bogga Google, Bing iyo Yahoo
8. Foomamka soo saara:
FMiner wuxuu taageertaa qaabab badan oo dhoofin ah sida Excel, CSV, HTML, XML, iyo JSON. sida MySQL, MS SQL, iyo Oracle.
9. Imtixaanka Captcha:
Waa in lagu hubiyo badbaadintaada internetka oo leh imtixaanka FMAP ee Captcha. Tani waxay ka hortagi doontaa qoryaha iyo xakamaynta inay galaan goobtaada oo ay ku jiraan adeegga saddexaad ee is-qabadsiinta.
10. Wakiil iyo Kukiyada loo Isticmaalayo Qarsoodi Anonymous:
Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee FMiner waa in ay taageerto kooxaha kala duwan iyo cookies si ay u aqoonsadaan. Macnaheedu waa ficil kasta oo aad ku qaadato internetka ma helin diiwaangalin iyo cinwaankaaga IP weli waa qarsoon yahay.
Waa inaad doorataa qaabka feylalka soo baxa oo u ogolow FMiner hawshiisa. Waxay soo saari doontaa xogta adiga, waxaadna kormeeri kartaa dhammaan tallaabooyinka ay sameeyeen qalabka. Mashruuca FMiner ee qaabka muuqaalka muuqaalka guud wuxuu qabsan doonaa dhammaan tallaabooyinka iyo qaabeynta khariidadda habka awood u leh inay la falgalaan bogagga shabakada lagu beegsanayo. Waxaa intaa dheer, waxay ku siin doontaa shaashado si aad ula socon karto tayada xogtaada. Faahfaahinta FMiner waxaa lagu kaydiyaa qaabab Excel, SQL ama CSV ah iyo in lagu daro faahfaahinta.